अन्तत: अमेरिकाद्वारा रसियामाथि प्रतिबन्ध घोषणा, अब के गर्ला रसियाले ? - Koshi Online
अन्तत: अमेरिकाद्वारा रसियामाथि प्रतिबन्ध घोषणा, अब के गर्ला रसियाले ?
बिबिसी, साउन २५
रूसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै अमेरिकाले नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ। बेलायतमा बस्दै आएका रूसका पूर्वजासुसमाथि स्नायु प्रणालीमा असर पार्ने घातक आक्रमण गरेको विरोधमा अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाउने भएको हो।
बेलायतमा बसोवास गर्दैआएका बेलायती नागरिक सर्गेई स्क्रिपाल र उनकी छोरी युलियामाथि गत मार्च महिनामा रूसी जासुसहरूले नोभिचोक नामको स्नायुप्रणालीमा असर पार्ने एजेन्टले आक्रमण गरेका थिए।
सर्गेइ स्क्रिपल र उनकी छोरी युलियालाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। युलिया अप्रिलमा अस्पतालबाट घर फर्किएकी थिइन् भने उनका बाबुले मेमा अस्पताल छोडेका थिए। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सन् १९९१ को कानुनअन्तर्गत पहिलो प्रतिबन्ध कांग्रेसलाई जानकारी गराएको छ।
यस विषयमा रूसले उचित कदम नचाले थप कडा प्रतिबन्ध लगाइने अमेरिकाले चेतावनी दिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बुधबार मात्र नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो। ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरी रासायनिक वा जैविक हतियार प्रयोग गरेको देखिएकाले रूसमाथि यस्तो कारबाही गर्नुपरेको हो’, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हिथर नर्टले भने। प्रतिबन्धअन्तर्गत ‘राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशील’ अमेरिकी प्रविधिहरू रूसलाई बेच्न पाइनेछैन। यस्ता प्रविधिहरूमा विद्युतीय उपकरणहरूका साथै क्यालिब्रेसन उपकरणहरू रहेका छन्। विगतमा यस्ता उपकरण निर्यात गर्न दिइएको थियो।
यसैबीच अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध अस्वीकार्य रहेको भन्दै रूसले आपत्ति जनाएको छ। अमेरिकासँगको सम्बन्ध रचनात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुने अपेक्षा गरिएको छ। ‘अमेरिकाले लगाएको नयाँ प्रतिबन्ध गैरकानुनी छ, यो अस्वीकार्य पनि छ’, क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भने। उक्त प्रतिबन्ध २२ अगस्तबाट लागू हुनेछ। यस्तै प्रतिबन्ध अमेरिकाले सन् २०१३ मा सिरियामा पनि लगाएको थियो। यसको प्रयोग उत्तर कोरियाले मलेसियामा बस्दै आएका किम जोङ उनका सौतेला दाजुको हत्या गर्न गरेको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघका रूसका सहायक स्थायी प्रतिनिधि दमित्री पोलीनस्काईले अमेरिकी प्रतिबन्ध अस्वीकार गरे। उनले ट्विट गर्दै भने, ‘बाहियात चिज जारी गरिएको छ। यसको साक्षी प्रमाण पनि छैन। कुनै अनुसन्धान पनि छैन। वस्तुगत तथ्य केही छैन, खालि अनुमानको भरमा यो र त्यो आरोप लगाइएको छ। एउटै नियम छ, प्रत्येक दोषका लागि रूसलाई जिम्मेदार ठहर्‍यायो। योभन्दा बाहियात कुरा केही हुन्छ ? अमेरिकी प्रतिबन्धको सबैले स्वागत गरौं।’